Izindaba - Umkhuba wokubonga we-RMB awukakasungulwa, izinkampani zokuhweba zakwamanye amazwe kumele zigweme izingozi zamazinga okushintshaniswa
Umkhuba wokubonga we-RMB awukakasungulwa, izinkampani zokuhweba zakwamanye amazwe kumele zigweme izingozi zokushintshaniswa kwemali
Umthombo: Times Finance
Umbhali: Yu Siyi Financial Times
Muva nje, ukwazisa okuqhubekayo kwe-RMB kudale ukukhathazeka.
NgoSepthemba 17, ukulingana okuphakathi kweRMB kuqhathaniswa nedola laseMelika kukhuphuke ngamaphuzu ayisisekelo ayi-150 aya ku-6.7675. NgoSepthemba 16, ukulingana okumaphakathi kweRMB uma kuqhathaniswa nedola laseMelika kukhuphuke ngamaphuzu angama-397 ayisisekelo kwaya ku-6.7825, kwathi isilinganiso esiphakathi nendawo senyukela kuJuni 2019. Siphezulu phezulu kusukela ngomhlaka-9. Lokhu kusho ukuthi kusuka ku-7.1954 ekupheleni kukaMeyi, i-RMB ibonge ngaphezu kwamaphuzu we-4,200.
Izinga lokushintshaniswa kwamabala le-RMB lifike ekuphakameni kwezinyanga eziyi-16. Yiziphi izinto ezibangele lo mzuliswano wokukhula kokubonga kwe-RMB? Ngabe ukwazisa okulandelanayo kusho ukuthi i-RMB ingene kumjikelezo omusha womjikelezo wokubonga? Uma i-renminbi ingena kumjikelezo wokwazisa noma inyuka ngokushesha okukhulu, izoba namuphi umthelela ezinkampanini zokuhweba zakwamanye amazwe nasekuvuseleleni umnotho? NgoSepthemba 16, abakwaTimes Finance baxoxisana noGuan Tao, isazi sezomnotho esiyinhloko seBank of China Securities nowayengumqondisi woMnyango Wezimali Ezikhokhelwayo zoMnyango Wezokuphathwa Kwezimali Zangaphandle.
"Manje ukuqina okuyisisekelo okunqobile ukungabi namandla kwezindaba." UGuan Tao ukholelwa ukuthi umkhuba wamanje wokubonga we-RMB awukakasungulwa, futhi kusenezinto eziningi ezingaqinisekile nezingaqiniseki. "Okwamanje, akukhona ukwazisa okujwayelekile kwe-renminbi, kepha ukuguquguquka okujwayelekile kwezindlela ezimbili esimweni sokulangazelela okuhlangene kanye nezikhindi."
Ngaphansi komthelela walolu bhubhane, inzuzo yezinkampani zokuhweba zangaphandle, ikakhulukazi izinkampani ezithunyelwa ngaphandle, icindezelwe. Ngaphansi kwengcindezi yokwazisa kwe-RMB, inzuzo encane ingavinjelwa lapho kukhokhelwa imali yakwamanye amazwe. UGuan Tao uthe ezinkampanini, lapho izinga lokushintshisana lincoma, kufanele zithenge imali yamanye amazwe futhi zixazulule kancane. Mayelana nobungozi bokuchayeka, uGuan Tao uphakamise ukuthi kufanele kube namathuluzi ahlukile wokukala izindleko nezinzuzo, futhi kusetshenziselwe phambili ukukhokhelwa kokushintshaniswa kwamazwe angaphandle kanye nokuthengisa noma izinketho zokuvikela izingozi.
"Uma i-renminbi iqhubeka nokwazisa, kungahle kube nezimo ezingakulungele ukuthunyelwa kwamanye amazwe futhi zivimbele ukuvuka komnotho." UGuan Tao uveze ukuthi inqubomgomo izowela koxantathu abangenakubhekana nobunzima, ukuguquguquka kwezinga lokushintshisana nokuzimela kwenqubomgomo yemali akunakwenzeka. Kunzima ukufeza izinhloso ezintathu ngasikhathi sinye. “Asikho isidlo sasemini samahhala emhlabeni. Asikwazi ukuyicela futhi siyifune. Kumele sicabange kahle ngalokho esizokunikela ngakho? Sikhetha imigomo yenqubomgomo ngokuya ngezinketho.